Ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna: mitohy ny fanenjehan’ny CUA ny taxi-moto - ewa.mg
News - Ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna: mitohy ny fanenjehan’ny CUA ny taxi-moto
Mitohy ny ady amin’ny tsy
fanaraha-dalàna eto Anta­nanarivo Renivohitra. « Tsy azo ekena ny
asa fitaterana olona ataon’ireo taxi-moto. Tsy nahazo alalana sady
tsy ara-dalàna ny fisiany. Ho mafy ny sazy miandry ireo mbola minia
manao izany asa izany”, hoy ny eo anivon’ny CUA. Nohitsin’izy ireo
fa anisan’ny sazy amin’izany ny fihibohana mandritra ny 10 andro.
Nanteriny fa manelingelina ny arabe sy ny fifamoivoizana sady
manembantsembana ny mpitatitra ara-dalàna ireny fitaovam-pitaterana
ireny. Anisan’iza­ny ny eny 67 ha, Ampefiloha, Ankadimba­hoaka,
Andrefan’ Ambo­hi­ja­na­hary, Ampasam­pito, Anja­nahary ary
mampitohy amin’Atsimondrano sy Avaradrano. Betsaka ny voka-dratsy
aterak’ity fitaovam-pitaterana iray ity. Mampiroborobo ny
asan-jiolahy izy ireny ary miteraka lozam-pifamoivoizana. “Aoka
isika tsy handeha taxi-moto ireny satria tsy azo antoka ary
mampidi-doza izy ireny. Tsy afaka mitory, tsy misy fiantohana ianao
raha tra-doza na misy maka an-keriny”, hoy ihany ny CUA.
L’article Ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna: mitohy ny fanenjehan’ny CUA ny taxi-moto a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 23/01/2021
Manan-karena ny zavakanto malagasy. Voaporofo etsy amin’ny AFT Andavamamba izany, amin’ny alalan’ireo karazan-javamaneno miranty ao amin’ny « Les faiseurs de musique ».Nosokafana, omaly, tao amin’ny Alliance Française etsy Andavamamba ny fampirantiana zavamaneno Malagasy, nampitondraina ny lohateny « Les faiseurs de musique ». Hetsika tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena. Valiha, korintsana, varatra, kaiambaramba, amponga, sodina, kabaosy, sns, samy tazana eny an-toerana avokoa. « Henatra ho antsika Malagasy ny tahaka izao satria ilay firenena nanjanaka sy lazaina ho nametraka fery maharary eto Madagasikara indray no mampahafantatra sy manondrotra ny asa tanana sy ny kolontsaina malagasy… Isaorana azy ireo ny nikarakarany hetsika tahaka izao », hoy Rakotorahalahy André, iray amin’ireo mampiranty etsy amin’ny AFT Andavamamba.Raha ny fanazavany, anisan’ny mahatonga ny asa tanana malagasy (indrindra fa ny zavamaneno malagasy vitan’ny Malagasy) tsy ho afa-mivelatra tahaka izao ny tsy fisian’ny rafitra sy lalana mazava miahy azy. « efa tokony ho indostria lehibe no misahana asa tahaka izao raha misy sehatra na tsena lehibe mandray azy », hoy izy. Nohamafisiny tamin’izany fa « ho an’ny mpikaroka sy mpanao asa tanana malagasy, miara-maty amin’ny mpamorona ny asa tanana voaforony ».Ankoatra ny tsy fisian’ny rafitra mazava ho an’ny asa tanana sy ny seha-pamoronana, tsy manana toerana na fotodrafitrasa na fomba hitahirizana ireny asa tanana sy asa famoronana ireny akory i Madagasikara, raha ny fanazavany. « Any ivelany, misy ny « Conservatoire », ahafahana mitahiry, fa ny antsika mba ahoana ? Ny fampidirana azy ireny any amin’ny sehatry ny fiarovana, toy ny Omapi, sns, aza, mbola mila volabe !», hoy hatrany Rakotorahalahy André.Tsy hifarana ity fampirantiana ity raha tsy ny 21 jona izao. Fampisehoana hotontosain’ireo nandray anjara tamin’ny fampirantiana no hanakatonana azy. Anisan’izany i Tiana Rainitelo, Ragasy, Rakotorahalahy André, Sarandra Beloba, Tony Za, Remby, Ratovo, sns.HaRy Razafindrakoto L’article Rakotorahalahy André: « Henatra ho antsika ny tsy fahavitana ranty tahaka izao » a été récupéré chez Newsmada.
Fanatrehana ny matso tetsy Mahamasina: tsy nipoitra ireo filoham-pirenena teo aloha
Nahitana seza banga maromaro. Nanamarika ny fanamarihana ny fetim-pirenena, omaly ny tsy nahatongavan’ireo filoham-pirenena telo teo aloha niatrika ny matson’ny Foloalindahy tetsy Mahamasina. Nahazo fanasana avokoa izy ireo. Anisan’izany ny amiraly Ratsiraka, saingy nitsabo tena any Frantsa. Any ivelany koa ny filoha Rajaonarimampianina raha tsy nahazoam-baovao kosa ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc. Na izany aza, nanotrona izany ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao. Anisan’ny mpitondra teo aloha tonga teny an-toerana kosa ny filoham-panjakana, Ratsirahonana Norbert Lala. Teo koa ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy eo anivon’ny FFKM. Ireo lehiben’ny Andrimpanjakana, nahitana ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikamban’ny governemanta sy ny hafa koa. Ankoatra izany, ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika. Anisan’izany ny Frantsay, ny Amerikanina, ny Japoney, i Sina sy ny avy amin’ny Pnud ary ireo sampan-draharahan’ny Firenena mikambana rehetra eto amintsika. Eo koa ireo solontenan’ny firenena afrikanina.Synèse R. L’article Fanatrehana ny matso tetsy Mahamasina: tsy nipoitra ireo filoham-pirenena teo aloha a été récupéré chez Newsmada.
Nametraka fanamby sy paik’ady ny zandary: “Tsy maintsy ho tratra i Del Kely”, hoy ny Cirgn Analamanga
Nanamafy ny kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena (CIRGN) Analamanga, ny Jly Rakotondrazaka Andry, momba ny raharaha Anjozorobe fa tsy maintsy ho tratran’ny zandarimaria ilay dahalo raindahiny sady mpaka an-keriny fantatry ny rehetra amin’ny solon’anarana hoe i Del Kely…Mbola mitohy ny savahao ataon’ny zandary ity dahalo raindahiny isan’ireo atidohan’ny fakana an-keriny ity raha efa tratra kosa ireo mpiara-dia aminy, izay tompon’antoka tamin’ny raharaha Anjozorobe. Momba ity raharaha fakana an-keriny tao Anjozorobe ity, nanao izay ho afany ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena amin’ny fanenjehana ireo dahalo. Nahitam-bokany izany tamin’ny fahatrarana ireo dahalo miisa 14 izay nahitana tsy ampy taona, araka ny fanazavan’ny zandary. Manoloana izany, nisy ny dinikasa niarahan’ny zandary amin’ireo tompon’andraiki-panjakana ao Anjozorobe niaraka tamin’ny lehiben’ny CIRGN Alaotra Mangoro sy Betsiboka satria manakaiky ireto faritra ireto ny distrikan’Anjozorobe. Nisy ny hetsika fampandrian-tany ataon’ny zandary any an-toerana amin’ny famongorana ny asan-dahalo. Nahitam-bokany izany satria dahalo miisa efatra hafa indray no voasambotra nandritra ny hetsika nataon’izy ireo. Nohamafisin’ny lehiben’ny CIRGN Analamanga fa tao amin’ny kaominina Ambongamarina no nahasamborana ireto dahalo ireto izay mpiara-dia amin’i Del Kely. “Tsy maintsy tratranay i Del Kely satria efa mihatery dia tery ny lalany amin’izao”, hoy izy. Nilaza kosa ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard fa olana ny tsy fahasahian’ny olona miara-miasa amin’ny mpitandro filaminana ka manjaka ny dahalo. Manomboka izao, izay dahalo tratra na mpimasy na iza, avy hatrany dia any Tsiafahy na aiza izy no tratra na aiza.J.CL’article Nametraka fanamby sy paik’ady ny zandary: “Tsy maintsy ho tratra i Del Kely”, hoy ny Cirgn Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Minisiteran’ny Tontolo iainana…; natao fitsirihana ireo fiaram-panjakana, 11 “inaptes”
Nidina ifotony teny Ampandrianomby sy Nanisana, afakomaly, nanao ny fitsirihana ara-teknika ireo fiaram-panjakana ampiasain’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ireo teknisianina mpitsara fiarakodia avy ao amin’ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR). Nahitana ny avy ao amin’ny ivontoerana fitsarana fiarakodia Betongolo notarihin’ny lehiben’ny ivontoerana, ny Kapiteny Ralandiranto Rado sy ny lehiben’ny ivontoerana fitsarana fiarakodia By-Pass/Alasora, ny Kapiteny Ravonena Andriamahatana Fils. Natao izao hanatanterahana ny voalazan’ny didim-panjakana laharana faha 71-138, ny 23 marsa 1971 andininy R.124 andalana faha-5 ao amin’ny andininy R.260 fizarana faha-3 ary nohamafisin’ny fanapahana nandritra ny filankevitry ny governemanta, ny 18 septambra 2019 teo fa tsy maintsy atao fitsirihana ara-teknika avokoa ireo fiaram-panjakana ampiasain’ny Andrimpanjakana, ny minisitera tsirairay ary ireo sampan-draharaham-panjakana miparitaka manerana ny Nosy. Fiara 35 no nanaovana fitsirihana teknika ka 11 no inaptes. Raha ny antontanisa voarain’ny DGSR tao anatin’ny telo taona farany nanaovana fitsirihana ara-teknika dia 954 ny fiaram-panjakana natao fitsirihana teknika, ny taona 2019 ka 114 inaptes. Ny 2020 kosa 1537 ireo fiara natao fitsirihana ka 133 inaptes. Tamin’ity taona ity kosa izany ho any volana janoary hatramin’ny volana jolay 2021 teo, 1066 no natao fitsirihana ka 62 inaptes.Jean ClaudeL’article Minisiteran’ny Tontolo iainana…; natao fitsirihana ireo fiaram-panjakana, 11 “inaptes” a été récupéré chez Newsmada.
Niafara tamin’ny fikasihan-tanana sady nahafaty mihitsy ny fifamaliana teo amin’ny mpianaka, teny Mandrosoa Ivato, afak’omaly maraina. Namoy ny ainy rehefa novonoin’ny rainy, 81 taona, tamin’ny zavamaranitra sy hazo lehibe ny zanany vavy, manodidina ny 40 taona. Nivalampatra teo an-tokotany ny vatana mangatsiaka feno ratra sy nihoson-dra. Nosamborina avy hatrany itsy raim-pianakaviana voarohirohy. Nokarakarain’ny mpiara-monina sy ny fokontany ny razana. Nanokatra fanadihadiana, nanomboka omaly, ny zandary eny Mandrosoa. Ny fitantaran’ny mpiara-monina nilaza ho nahita ny zavaniseho no nahafantarana ny fizotry ny loza teo amin’ireto mpianaka. “Nitsoaka ilay zanaka vavy taorian’ny fifandirana teo amin’izy sy ny rainy. Natory tao amin’ny mpanofa trano teo amin’ny manodidina itsy vehivavy. Ny maraina (Naotin’ny fanoratana: alahady maraina) izy vao nody. Niampy ny hatezeran’ny rainy nanoloana izany. Nitohy ny fifamaliana ary io niafara tamin’ny famonoana io mihitsy. Nampandre ny mpitandro ny filaminana avy hatrany izahay rehefa nahita ny fikasihan-tanana nahery vaika”, araka ny fitantaran’ny olona eny Mandrosoa. Voalaza hatrany fa tamin’ny alalan’ny vely fanoto sy maritoa ary antsy no nanaperana ny ain’ilay vehivavy. Ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro ny filaminana, tetsy an-kilany, no nahalalana ny toepiainan’ireto mpianaka ireto. Fantatra fa “tsy salama saina ilay vehivavy. Miara-mipetraka amin’ny rainy izy sy ny zanany vavikely. Any Mahajanga kosa ny zanany iray”, araka ny fanampim-baovao. L’article Adina mpianaka :: Vehivavy novonoin’ny rainy teo an-tokotany est apparu en premier sur AoRaha.